Fepetra fampiasana - Best Forex EA ny | Expert Advisors | FX Robots
(Effective as of 02 / 05 / 2018)
Tongasoa eto amin'ny "BEST FOREX EA'S | FAMPISORANA FAMPIASANA | FX ROBOTS tranokala (BESTFOREXEAS) izay manome sehatra azo itokisana ho an'ireo mpampiasa hahitana ny toerana sy ny mpivarotra tonga lafatra mba hahatonga ny hetsika ho tsy hay hadinoina. Ireo fepetra sy fepetra manaraka dia mihatra rehefa mijery na mampiasa ny tranokala na ny serivisy amin'ny alàlan'ny https://www.bestforexeas.com
Miezaha hijery akaiky ireto teny manaraka ireto. Amin'ny fampidirana na fampiasana ny sehatra na serivisy BESTFOREXEAS dia midika ny fifanarahana aminao momba ireo Terms sy fepetra. Raha tsy manaiky ireo fepetra ireo ianao dia mety tsy afaka miditra amin'ny tranokalanay na mampiasa ny sehatra na serivisy BESTFOREXEAS.
BESTFOREXEAS dia manaja ny tsiambaratelon'ny mpiserasera rehetra ao aminy. Miaro ny fiarovana ny fiainanao manokana sy ny tsiambaratelo izahay. Fantatsika fa ny mpitsidika rehetra ao amin'ny vohikalantsika dia manan-kery hahafantarana fa ny angona manokana napetrak'izy ireo dia tsy ampiasaina amin'ny tanjon'izy ireo, ary tsy ho tafiditra ao an-tànan'ny antoko fahatelo.
Miezaka izahay mba hitazona ny tsiambaratelo ny fampahalalana rehetra omenao anay, ary manantena fa hiverina ianareo.
Ny Fitsipika momba ny fampiasana sy ny Politika momba ny fiainana manokana dia mifanaraka amin'ny lalàna amerikana, ary ny lalàna UK dia mifanaraka amin'izany, ary ao anatin'izany ny fangatahan'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny angom-baovao (GDP). Ny lalàna dia mitaky antsika hiteny aminareo momba ny zonao sy ny adidinay aminao mikasika ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny angona manokana. Manao izany izao isika, amin'ny fangatahana ny hamakianareo ny fanazavana omena ao www.knowyourprivacyrights.org
Ankoatra ny voalaza etsy ambany, tsy mizara, na mivarotra, na manambara any amin'ny antoko fahatelo isika, ny vaovao rehetra nangonina tamin'ny tranokalantsika.
BESTFOREXEAS dia napetraka tao amin'ny 2011 avy amin'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina mahomby, izay manome vahaolana maimaim-poana ho an'ny varotra amin'ny Forex Market.
Ny varotra amin'ny varotra dia tena sarotra ary hanampy anao izahay hahay mifidy ny Best Forex EA araka ny zavatra ilainao. Maro ny mpivarotra avy amin'ny sehatra mandany taona amin'ny varotra forex izay tsy misy fahombiazana, fa isika kosa manome soritr'aretina rakitra ho antoka fa ireo Forex Robots ireo dia tena hanampy hanatsara ny fahombiazan'ny varotra.
BESTFOREXEAS dia manome anao fanadihadihana sy valiny voaporofo avy amin'ny mpanolo-tsaina 300 + FX Expert.
fisoratana anarana; FAMPIANARANA HO AN'NY ANKIZY SY MAMPIASA NY PRODUCT FOREX
Tokony ho efa 18 taona farafaharatsiny mba hisoratra anarana ary hampiasa ny vokatra & tranokala BESTFOREXEAS.
Raha toa ianao ka mpampiasa izay manoratra amin'ny BESTFOREXEAS vohikala mba mahita vaovao, cryptocurrency tsena satroka, tondro ary misy cryptocurrencies ara-nofo, izy / izy dia tsy maintsy tsy maintsy mamorona manokana tantara ao amin'ny tranonkala izay ahitana ny anaranao feno sy ny adiresy email mba hahazoana ny BESTFOREXEAS tranonkala ary handray hafatra fampahafantarana avy amin'ny BESTFOREXEAS.
Manaiky ny hampahafantatra anay avy hatrany amin'ny fampiasana tsy nahazoan-dalana ny data manokana. Na izany aza dia manaiky ianao fa ny BESTFOREXEAS dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka, ny fahavoazana, na ny fahavoazana vokatry ny fampiasana tsy nahazoana alalana ny anaranao sy ny adiresinao mailaka.
ANKIZY TIAKO IREO TRANO ANY AMIN'NY WEBITRY
Ny antoko fahatelo dia mety hamoaka dokam-barotra amin'ny tranokalantsika. Raha manao izany ianao dia afaka mampiasa teknolojia izay manangona ny vaovao momba anao rehefa misy ny dokam-barotra ao amin'ny tranokalantsika.
Ny BESTFOREXEAS dia tsy manana hifehezana ireo teknolojia ireo na ny angon-drakitra takian'ireo antoko ireo. Noho izany, ity tsiambaratelo momba ny fiainana ity dia tsy manazava ny fomba fampahafantarana an'ireny antoko fahatelo ireny.
ANTSIRABE SY FIZARANA
Ity no vaovao nomenay anao amin'ny maha-mpiara-miasa aminay na amin'ny maha-mpiara-miasa aminareo. Izany dia mamela antsika hamantatra ireo mpitsidika izay niresaka taminao, ary hanome alalana anao hanao asa fitakiana noho izany fakana an-tsoratra izany. Anisan'izany ny fampahalalana izay mamela antsika handefa iraka ho anao.
BESTFOREXEAS dia tsy ampiasaina amin'ny tanjona hafa. Ny BESTFOREXEAS dia mikendry ny hitazona ny tsiambaratelo momba ny vaovao sy ny fepetran'ny fifandraisantsika. Manantena izahay fa misy mpiara-miasa na mpiara-miasa manaiky hanaiky ity politika ity.
FAMPIANARANA AMIN'NY ANKAPOBENY MIVILY SYSTEMS MANDRAKIZAY TAO AMIN'NY WEBSITE
Ny Cookie dia rakitra lahatsoratra kely izay napetraka eo amin'ny rantsan-tanan'ny solosainao amin'ny alàlan'ny Internet browser rehefa mamangy tranonkala rehetra. Mamela ny vaovao nangonina ao amin'ny pejy iray amin'ny tranonkala iray hotehirizina izy ireo raha tsy ilaina amin'ny fampiasana iray hafa, ahafahan'ny tranonkala manome anao traikefa manokana sy ny tompon'ny tranokala manana statistika momba ny fampiasana ny tranonkala mba hanatsarana izany.
Misy ny cookie sasany mety haharitra mandritra ny fe-potoana voafaritra, toy ny andro iray na mandra-pamoakanao ny navigateur. Ny hafa dia maharitra mandrakizay.
Ny navigateur web anao dia tokony hamela anao hamafa izay safidinao. Tokony hamela na hisakanana ny fampiasana azy koa izany.
Mampiasa cookies ny tranonkala BESTFOREXEAS. Izy ireo dia napetraka avy amin'ny rindrambaiko izay miasa eo amin'ny servery, ary amin'ny alalan'ny rindrambaiko no ampiasain'ireo antoko fahatelo izay ampiasain'ny serivisy ampiasaintsika.
Rehefa mitsidika voalohany ny tranokalanay ianao dia manontany anao raha tianao ny hampiasa cookies. Raha misafidy ny tsy hanaiky azy ireo ianao dia tsy hampiasa azy ireny mandritra ny fitsidihanao afa-tsy ny filazana fa tsy nanaiky ny fampiasana azy ho an'ny tanjona hafa.
Raha misafidy ny tsy hampiasa cookies ianao na hisoroka ny fampiasana azy amin'ny sehatry ny tranokala, dia tsy ho afaka hampiasa ny sehatra rehetra ao amin'ny tranonkalanay ianao.
Mampiasa cookies izahay amin'ireto fomba manaraka ireto:
Mandiniha ny fomba ampiasanao ny tranokala BESTFOREXEAS
Mba hanoratana raha nahita hafatra manokana ianareo dia aseho amin'ny tranokalanay
Mba hitazonana anao hanao sonia ao amin'ny tranokalanay
Manorata ny valin-teninao amin'ny fanadihadiana sy ny fanontaniana misy ao amin'ny tranokalanay raha hamita azy ireo ianao
Manorata ny adihevitra mandritra ny resadresaka mivantana miaraka amin'ny ekipa mpanohana
Mahafantatra sy manaiky ianao fa BESTFOREXEAS sy ny licensors mitana tompon'ny fananana ara-tsaina rehetra na inona na inona ny zo mifandraika amin'ny BESTFOREXEAS tranonkala, anisan'izany ny azo ampiharina zon'ny mpamorona, famantarana sy ny format manan-tompo hafa zo.
Ny rohy votoaty hafa sy ny anaran'ny orinasa voatonona ao amin'ny vohikala BESTFOREXEAS dia mety ho marika famantarana ny tompony. BESTFOREXEAS dia mitazona ny zon'ny tsirairay izay tsy omena alalana anao amin'ity Fifanarahana ity.
EMAIL ATAOVY AZO AMPIASAINA NY FITIAVANA
Fifandraisana atao amin'ny alalan'ny mailaka sy hafatra BESTFOREXEAS rafitra, dia tsy miendrika ho BESTFOREXEAS filazana ara-dalàna na misy ny mpiandry raharaha, mpiasa, mpiasa na ny solontena Na izany na tsy filazana ny toe-javatra izay BESTFOREXEAS dia takian'ny fifanarahana na lalàna na fitsipika.
TORO LALANA (GARANTENA)
Ny fifanakalozana ara-barotra dia mety hampidirina amin'ny loza mety hitranga tsy voatanisa. Tsy mety ho an'ny mpampiasa vola izany ary tokony ho azonao antoka fa azonao antoka ny mety hampidi-doza, mitady torohevitra mahaleotena raha ilaina. Ireo kaonty Forex dia matetika manolotra dingana maro samihafa ary ny mety hitrandrahana avoakany dia avoakany noho ny risika mitovy.
Tsy tokony hampidi-doza na oviana na oviana fa tsy vonona ny hamoy ny ainy ianao ary tokony handinika tsara ny traikefanao ara-barotra.
Ny fanandramana taloha sy ny vokatra simulated dia tsy ilaina ny maneho ny ho avy. Ny votoatin'ity tranonkala ity dia maneho ny hevitry ny mpanoratra fotsiny ary tsy manolotra tolo-kevitra manoloana ny hividy ny vokatra voalaza ato.
FIVORIANA MIARAKA AMIN'ANDRIAMANITRA
Ny fifanakalozana fifanakalozana fifanakalozana eo amin'ny maria dia mitondra risika avo lenta, ary mety tsy mety ho an'ny mpampiasa vola. Ny haavon'ny fitaovana avo lenta dia afaka manohitra anao sy ho anao. Alohan'ny fanapahan-kevitranao hampiasa vola amin'ny fifanakalozana vahiny, tokony hohazavainao tsara ny isan'ireo traikefa momba ny fampiasam-bola, ary manandrana ny fialan-tsiny. Mety misy ny mety hahafahanao manohana ny fahaverezan'ny sasany na ny fampiasam-bola voalohany anao ary noho izany dia tsy tokony hampiasa vola izay tsy ahafahanao mamoy.
Tokony hahafantatra ny mety hisian'ny fifanakalozana ara-barotra vahiny ianao, ary mitady toro-hevitra avy amin'ny mpanolotsaina ara-bola mahaleotena raha toa ianao manana ahiahy. Fantaro tsara izany; Ny fampahalalana voarakitra ato anatin'ity làlana ity dia tsy fanasana hanatsara ny fampiasam-bola manokana.
Ny fifampiraharahana dia mitaky vola mitaky vola amin'ny fikatsahana tombony amin'ny ho avy. Izany no fanapahan-kevitrao. Aza mieritreritra vola izay tsy azonao atao ny ho very. Ity tahirin-kevitra ity dia tsy mamaly ny toe-bolan'ny tsirairay sy ny toe-bolany manokana. Natao ho an'ny tanjona fampianarana fotsiny izy io fa tsy amin'ny toro-hevitra momba ny fampiasam-bola manokana.
Aza manao an'izany raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny mpampiasa anao na ny mpandraharaha mpanolotsaina ara-bola, izay hanamarina izay mety ho an'ny zavatra manokana sy ny toe-javatra manokana. Ny tsy fitadiavana toro-hevitra matihanina mialoha ny hetsika dia mety hitarika anao hanao zavatra mifanohitra amin'ny tombontsoanao manokana ary mety hitarika ny fahavoan'ny renivohitra.
BESTFOREXEAS PRODUCTS & WEBSITE, TSY MANAIKY NY "ASA", TSY MAHASOA NY FITAHIANA IZANY. TSY mametra NY etsy ambony, BESTFOREXEAS mazava mandà REHETRA fiantohana, na EXPRESS, Te hilaza OR didy, momba ny vokatra na LOHA HEVITRA ATO ANATINY TRANONKALA anisan'izany TSY MISY fiantohana fetra NY MERCHANTABILITY, Fitness HO ZAVA-KENDREN'NY manokana, TITLE, ARO VOINA, marina sy ny tsy-fandikan-dalàna.
TSY mametra NY etsy ambony, BESTFOREXEAS MAMPAHITA fiantohana NA TSY IZAY REPRESENTATION miditra na miasa NA NY TRANONKALA LOHA HEVITRA ATO ANATINY NO UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. Ianareo MANAIKY FAHATANY ny FENO andraikitra sy ATAHORANA NY very vokatry NY downloading SY / na mampiasa NY antontan-taratasy, vaovao, ENTANA, ny votoatiny na KEVITRA azo MATOAN-WEBSITE. TSY MISY FAHASALAMANA TSY MISY TSY MISY TSY MANAIKY AZY IZANY, TSY AZO AMPIASAINA ITY IZANY.
MITADY AZA AMINAREO ITY:
IANAO NO fotsiny tompon'andraikitra REHETRA NY NY fifandraisana SY mifanerasera amin'ireo Agent sy ny mpampiasa ny BESTFOREXEAS TRANONKALA SY SAMPAN-DRAHARAHA SY hafa tavan'olona izay IFAMPIRESAHANA NA mifandray Ho vokatry ny ny fampiasana ny BESTFOREXEAS TRANONKALA NA ENTANA, anisan'izany, tsy misy fetra, FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO SY FANDINIHANA NY TANJONA ASA.
TSY MISY AZO ANTOKA NY FAMONJENA ANTSIKA TSY MISY TSY MISY TSY MISY INTSONY ANY ANKIZY ANY AN-DALAN'ANDRIAMANITRA TANTERAKA, TSY MISY ANTSIKA TSY MISY IREO TANTERAKA TSY MANAIKY NY SORATRA MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'NY WEB SITE ARA-DALANA, TSY MISY IREO MISY IREO MISY IREO SAROBIDY AMIN'IZANY.
BESTFOREXEAS MAMPAHITA NA TSY fanehoana fiantohana raha ny amin'ny fitondran-tenan'ny antoko fahatelo LINKS, mpampiasa na mpiasa NY BESTFOREXEAS TRANONKALA NA SAMPAN-DRAHARAHA na ny mifanentana akory va OR CURRENT NA mpivarotra mpampiasa HOAVY NY NY BESTFOREXEAS TRANONKALA OR VOKATRA.
Manaiky ianao, dia alao fepetra rehetra MANDANJALANJA SY fifandraisana fifandraisana hafa mpampiasa ny BESTFOREXEAS TRANONKALA SY ENTANA SY tavan'olona hafa izay mifanerasera IFAMPIRESAHANA OR vokatry ny ny fampiasana ny BESTFOREXEAS TRANONKALA OR VOKATRA.
MOMBA NY FAMONJENA NY FITIAVANA
Tsy misy ato amin'ity lisansy ity:
Mamehy na manafoana ny andraikitry ny fahafatesana na ny ratra nahazo azy vokatry ny fahamendrehana;
Mamehy na manafoana ny tompon'andraikitra rehetra noho ny hosoka na hosoka;
Amboary ny sandany amin'ny lafiny rehetra izay tsy avela eo ambanin'ny lalàna mihatra; na
Manaisotra izay mety tsy azo ekena amin'ny lalàna manan-kery.
Raha manana fanontanina momba ny fampiasana ny fampiasana anay ianao dia manorata amin'ny mailaka amin'ny [mailaka voaaro]
Raha misy ampahany amin'ity Fifanarahana ity dia atao tsy manan-kery na tsy azo trandrahina, dia ampitaina mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery io ampahany amin'ny fifanarahana io. Ny ampahany sisa dia hitoetra ho feno sy vokatra feno. Ny tsy fahombiazan'ny BESTFOREXEAS hampihatra ny fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity dia tsy ho raisina ho toy ny famoahana ny zontsika hanerena izany. Ny zontsika eto amin'ity fifanarahana ity dia ho tafavoaka velona amin'ny fampiatoana ny fifanarahana.
Manaiky ianao fa na inona na inona fihetsika mifandray amin'ny na fifandraisana amin'ny BESTFOREXEAS dia tsy maintsy manomboka ao anatin'ny taona iray aorian'ny fisian'ny hetsika. Raha tsy izany, ny hetsika toy izany dia voarara tanteraka.
Ianareo manaiky fa efa namaky ianareo fampiasana ireo teny ireo hahatakatra ny TERMS, ary ho voafatotry ny ireo teny ireo. MITADIAVAKO IZANY IZANY IREO FAMONJENA IREO FIVORIANA MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'NY FITANTANANA SY AMPIASAINA IREO MITOVY AMIN'IZAO TONTOLO IAINANTSIKA ETO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO SY NY FITIAVANA IREO MOMBA NY FIFIDIANANA SY NY FAMPANDROSOANA MOMBA NY MIRALENTA SY NY FAMPANDROSOANA SY NY FIFANDRAISANA AMIN'ANDRIAMANITRA AMIN'IZANY ANKAPOBENY.
Copyright (c) 2018 (s) amin'ny famoahana voalohany BESTFOREXEAS
Manoloana ireo fepetra maneho ny fampiasana ireo fampiasana ireo
Izahay, miaraka amin'ireo mpamorona anay, dia manana sy manara-maso ny zon'ny mpamorona rehetra sy ny zo ara-tsaina hafa ao amin'ny tranokalan'i BESTFOREXEAS ary ny fitaovana ao amin'ny tranokalanay; ary
Ny zon'ny mpamorona rehetra sy ny zo ara-tsaina hafa ao amin'ny tranonkala BESTFOREXEAS ary ny fitaovana ao amin'ny tranokalanay dia natokana.
Ny fampiasana ny fampiasana ny fampiasana anay dia novolavola mba hanarahana ny lalànan'ny firenena tsirairay na ny juridiction araka ny lalàna izay tanjonay hanao raharaham-barotra. Raha mihevitra ianao fa tsy mahafa-po ny lalànan'ny faritra misy anao, dia tianay ny hihaino anao.
Na izany aza, amin'ny farany dia safidinao raha tianao ny hampiasa ny tranokalanay.